Chatroulette USA Isitshayina - Ividiyo Ukukhangela Injini e Ukukhangela
Chatroulette USA Isitshayina – Ividiyo Ukukhangela Injini e Ukukhangela
Malunga ne-CBS Interactive umgaqo-Nkqubo wabucala Ad Oyikhethileyo Imigaqo Yokusebenzisa Torrent Omdala Downloads Imidlalo incwadi egcina ii akhawuti Umculo Ividiyo Ephambili Umfanekiso-China Iindaba Abantu Iimoto Pokémon Yiya Imisebenzi Iimifanekiso Real Estate Isikhokelo Gizmos Chatroulette kuphela ezintathu.
Steve Kroft kusini na kwi Isitshayina telecom isigebenga s pursuit yokwakha isizukulwana esilandelayo ka-digital networks kwi-U. S. Inkcubeko Xa Chatroulette yi jones-bhanyabhanya (elungileyo indlela) yokuthengisa omtsha-bhanyabhanya Yokugqibela Exorcism, abalimi kukhokela apparently unsuspecting ChatRoulette ukukholelwa ngabo malunga ukubona. Ibali Chatroulette, site waseka nge -yeminyaka ubudala Russian abo amaphupha ka-founding inkampani kwi-U. S, sele abanye ngokukhuthaza izifundo kuba i-american ishishini kwi Web. Chatroulette yenzelwe ukuba ukwazi amadonga betha phantsi ukusuka kwesinye okungaziwayo ividiyo incoko komnye, kunye abanye abantu umnikelo kubalulekile incoko nabanye umnikelo into kakhulu seedier.
Isoftwe kwi-Chatroulette, Web ngu kukufutshane ukuba i-real ihlabathi. Chatroulette ngu kokufumana ezininzi criticism, kodwa mhlawumbi media ingaba identifying ngalendlela into ngu-hayi. Ukhuseleko Chatroulette shines Webcam apho abantwana shouldn t jonga. I-Russian esekelwe ividiyo incoko inkonzo ingxamele kujike ethandwa kakhulu, kodwa ke kufuneka ngaphandle kwemida ukuze abantwana. Facebook app Ngokungafaniyo Chatroulette, ngokucacileyo ngu a kuma-yedwa Web esekelwe inkonzo, Incoko Improv ngu essentially a Facebook isicelo, kwaye ngenxa ukuba, ingaba ngathi ayixhasi namnye kunikela abasebenzisi ezinye izibonelelo. Inkcubeko Airtime: Incoko kunye bolunye uhlanga malunga kweengcuka kwaye ixesha lendawo. Sean Parker s entsha ividiyo incoko inkonzo ezama ne-jikelele abantu ngokusekelwe usharedi umdla, nangona kukho into ikhangeleka kuba wonke. Ngokunxulumene Nat Thomson, Ingqwalasela USA s creative umlawuli, babo inguqulelo Chatroulette Bingo onayo amawaka utyelelo kwaye amakhulu tweets, ndenza ngaphambili iphepha kunye Digg kwaye Buzzfeed kunye. Amazon kwaye u-Microsoft uqhankqalazo a nephepha yaba, Google Komhlaba iza-Android phones, kwaye apha ke incoko site ukuphepha ngaphandle kokuba care ukubonisa i-anatomy ka-olugqibeleleyo bolunye uhlanga
Musa Tshata a Isitshayina Umfazi Ngaphandle Ukwazi Ezi Iincam →